Neuro Mag Magnesium L Threonate | Mega Planet Co., Ltd
Food Suplement Medical Drug Cosmetic
Neuro Mag Magnesium L Threonate
Magnesium is an essential mineral with important roles in the brain supporting healthy memory and youthful cognitive function. Neuro-Mag® Magnesium L-Threonate provides an ultra-absorbable form of magnesium, making it perfect for memory and cognitive health support. Help maintain your brain health with Neuro-Mag®!
Unique, highly-absorbable magnesium supplement1
Supports healthy memory and youthful cognitive function1,2
Helps maintain crucial synaptic connections between brain cells1,2
Helps facilitate healthy brain cell signaling pathways1-3
More Facts about Neuro-Mag® Magnesium L-Threonate
Magnesium is needed for more than 300 biochemical reactions and 600 enzymatic reactions in the body.4,5 In particular, magnesium plays important roles in the nervous system and brain functions5.
Unfortunately, most Americans don’t get enough magnesium from their diet, and magnesium deficiency increases with age.6,7 Not all magnesium supplements are readily absorbed into the central nervous system. But Neuro-Mag® magnesium L-threonateisaunique form of magnesium that is better absorbed by the brain.1
Inapre-clinical model, the magnesium L-threonate contained in Neuro-Mag® could boost magnesium levels in the cerobrospinal fluid (the liquid around your brain and spinal cord) by as much as 15% after only 24 days.1
Magnesium L-threonate was also shown to improve short-and long-term memory by almost 100% 1, and to help maintain effective function and quantity of synaptic connections between brain cells.1,2
Magnesium L-threonate also helps facilitate important brain cells signaling pathways, which are associated with improved memory.1-3 That’s why ultra-absorbable Neuro-Mag® is our best magnesium supplement for cognitive health.
A single bottle of Neuro-Mag® Magnesium L-Threonate contains 90 vegetarian capsules — enough foraone-month supply. The suggested daily dose of three capsules provides 2,000 mg of magnesium L-threonate, the preferred form of magnesium for enhanced memory and cognitive health support. So, try Neuro-Mag® today … and help maintain your brain health!
Take one (3) capsule one to three times daily with or without food, or as recommended byahealthcare practitioner.
Other ingredients : vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, stearic acid, silica, vegetable stearate.
Magtein™ isaregistered trademark of Magceutics, Inc. and is distributed exclusively by AIDP, Inc. Magtein™ is protected under U.S. patents 8,178,118; 8,142,803; 8,163,301 and other patents pending.
Magnesiumသည် ဦးနှောက်နှင့် ကျန်းမာသည့် ဉာဏ်ရည်နှင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုသည့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အရေးပါသည့်ကဏ္ဍများအတွင်း မရှိမဖြစ် သတ္ထုဓာတ်ဖြစ်သည်။ Magnesium L-Threonate	သည် Magnesium ၏ အထူးစုပ်ယူအားကောင်းသည့် ပုံံစံတစ်မျိုးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ဉာဏ်ရည်နှင့် အသိဉာဏ်ကျန်းမာရေးကို ပြီးပြည့်စုံစွာပံ့ပိုးပေးပြီး Neuro-Mag ဖြင့် သင့်ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
ပြီးပြည့်စုံ၍ ထူးကဲစွာစုပ်ယူနိုင်သည့် Magnesium ဖြည့်စွက်မှု
ကျန်းမာသည့် မှတ်ဉာဏ်နှင့် နုပျိုသည့်ဉာဏ်ရည်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်
ဦးနှောက်ဆဲလ်များအကြား အရေးပါသည့် synaptic ချိတ်ဆက်မှုများကို ကူညီပေးသည်
ကျန်းမာသည့်ဦးနှောက်ဆဲလ်အချက်ပြသည့် လမ်းကြောင်းများကို ပြင်ဆင်ပေးသည်
Neuro-Mag Magnesium L-Threonate ၏ အခြားသောအချက်အလက်များ
ခန္ဒာကိုယ်တွင်းရှိ 300 biochemical reactions and 600 enzymatic reactions များအတွက် Magnesium ကိုလိုအပ်မည်။ သာမန်အားဖြင့် Magnesium သည် သွေးကြောစနစ်နှင့် ဦးနှောက်လုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသည့်ကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် အမေရိကန်အများစုသည် ယင်းတို့အာဟာရ ဖြည့်စွက်မှုအတွင်း Magnesiumလုံလောက်စွာမရကြပေ။ သို့သော်လည်း Neuro-Mag Magnesium L-Threonate သည် ဦးနှောက်မှ ကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင် သည့် ပြီးပြည့်စုံသည့် Magnesium ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး Magnesium အဆင့်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
ရောဂါအကြီးစားမဟုတ်သည့်ပုံစံတစ်ခုတွင် Neuro-Mag အတွင်းပါဝင်သည့် Magnesium L-Threonate သည် cerebrospinal fluid ( သင့်ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးမကြီးအတွင်းရှိ အရည်) အတွင်းရှိ Magnesium Level များကို (၂၄)နာရီကြာပြီးနောက်တွင် ၁၅%အထိ မြှင့်တင်ပေးသည်။
ကျန်းမာသည့် မှတ်ဉာဏ်နှင့် ဉာဏ်ရည်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
Neuro-Mag Magnesium L-Threonate သည် ရေတို-ရေရှည် ဉာဏ်ရည်များကို များသောအားဖြင့် ၁၀၀%မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ဦးနှောက်ဆဲလ်များအကြား ရှိ synaptic connections ၏ ထိရောက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အရေအတွက်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
Neuro-Mag Magnesium L-Threonateသည် ဖွံ့ဖြိုးလာသည့် မှတ်ဉာဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရေးပါသည့် ဦးနှောက်ဆဲလ်များ၏ အချက်ပြလမ်း ကြောင်းများကို ကူညီပြင်ဆင်ပေးခြင်းကြောင့် အထူးစုပ်ယူအားကောင်းသည့် Neuro-Mag သည်ကျွန်တော်တို့၏ ဉာဏ်ရည်ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး magnesium ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သည်။
Neuro-Mag Magnesium L-Threonate တစ်ပုလင်းအတွင်း သတ်သတ်လွတ်ဆေးတောင့် (၉၀)ပါဝင်ပြီး တစ်လစာဖြည့်စွက်မှုအတွက် လုံလောက်သည်။ အကြံပြုထားသည့် နေ့စဉ် (၃)တောင့်မှီဝဲခြင်းဖြင့် 200mg of Magnesium L-Threonate ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ယင်းသည် မှတ်ဉာဏ်နှင့် ဉာဏ်ရည် ကျန်းမာရေးအတွက် အတည်ပြုထားသည့် ကျယ်ပြန့်သည့်ပံ့ပိုးမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ပဲ သင့်ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပါစို့။
အပြင်ဖက် စည်းတံဆိပ်မှ ပျက်စီး ယိုယွင်းနေလျင် ဝယ်ယူခြင်းမပြုရန်
အကယ်၍ သင်သည် ဆေးကုသမှုခံယူ (သို့) သင်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေ/ နို့ရည်ထွက် ရှိနေသည့် အတွက်ဆေးကုသခံနေဆဲကာလ အတွင်းဖြစ် လျင် ကျေးဇူးပြု၍ ယင်း အာဟာရဖြည့်စွက်စာများစားသုံးမှုအတွက် သင်၏ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါရန်။
နေ့စဉ် ဆေး(၃)တောင့်ကို အစာနှင့်အတူ (သို့) မစားမီ (သို့) ဆရာဝန်ညန်ကြားသည့်အတိုင်းသုံးစွဲရန်။
Magnesium L-Threonate သည် အခြားသော magnesium ပုံစံများထက် ဝမ်းမှန်စေသည့် အာနိသင်ရှိသည်။
အရွယ်ပမာဏ- သတ်သတ်လွတ် ဆေးတောင့် (၃)တောင့်
ဆေးတစ်ဗူးလျင်- အတောင့် (၃၀)
Magnesium (from 2000mg Magtein Magnesium L-Threonate) 144 mg
အခြားပါဝင်မှုများ : ဟင်းရွက်ဆဲလ် (capsule), microcrystalline cellulose, stearic acid, silica, ဟင်းသီးဟင်းရွက် stearate
Magtein မှာ Magceutics ၏မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြိး AIDP မှသီးသန့်ဖြန့်ချိပေးသည်။ Magtein အား U.S မူပိုင်ခွင့်အမှတ်- 8,178;8,142,803;8,163,301 နှင့်အခြားမူပိုင်ခွင့်များအရ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Building (No -30) ,4Floor , Aung Mar Ga Street, Byaing Yay Oe Zin, Tamwe Township.
09-792363748, 09-784456045, 09-978681101, 09-256842521
09-751058482, 09-893135249, 09-674016416, 09-976290319
© 2018-2020 Mega Planet Co., Ltd. All Rights Reserved Web Design by NetScriper